Ngokuvamile ubukhulu ezindlini yesimanje ungavumeli ukuba ifakwe endaweni ehlukile umsebenzi ikhompyutha noma kufanelekile ku kwelinye lamakamelo ithebula egcwele, lapho ungafaka konke ukwaziswa imishini ekhaya ehhovisi. Kodwa ngaphezu kweminye imishini, kukhona iyunithi uhlelo kanye qapha, okuyinto futhi ufuna ukubeka induduzo umsebenzisi esiphezulu. Khona-ke basisize encane ikhompyutha emadeskini Ubukhulu nesizotha bakwazi ukungena ungabafihleli lutho, ngisho ekamelweni elincane kakhulu.
Kuyadingeka ukuba acabangele Ubukhulu ekamelweni lakho, ukumisa umkhiqizo ukukhetha ifenisha esifanele egumbini lakho plan onjalo nokusebenza yayo.
Njengomthetho, emadeskini amancane computer unxande emincane. Omunye izinzuzo ifenisha enjalo kuyinto adjustable ukuphakama countertops.
ithebula kukanxande kungcono ukukhetha labo basebenzisi inombolo sawo kungagcini PC olulodwa noma ikhompyutha ephathekayo. Lokhu ifenisha siqukethe phezulu etafuleni, ume iyunithi uhlelo futhi iphaneli ngokuhambisa ngaphansi ikhibhodi. Yiqiniso, amamodeli ezahlukene amatafula computer evumela ukwandisa kancane endaweni yakho yokusebenza ngokungeza zonke izinhlobo emashalofini futhi add-on. Ngakho ungathola zakudala nethebula ukuma, okuyinto ngeke bathathe eningi isikhala ububanzi, kodwa uzobe enwetshiwe kakhulu ubude.
ithebula Corner esivumelana kakhulu ngenxa ukucushwa yayo futhi ikuvumela ukuba uthathe isikhala ubuningi ezisemagumbini egumbini. Ngokufaka ifenisha, ungakwazi ukwandisa isikhala khulula egumbini. Ngenxa ubunjalo ezakheke amatafula ezifana abe usule ukhululekile ebanzi, lapho ubukhulu kuningi kunokomuntu izilinganiso ikhompyutha amatafula ukuma unxande. Ngaphezu kwalokho, onobuhle ezifana kakade eziningi emashalofini esakhelwe futhi kufanale agqoke izikhindi zangaphansi, lapho kuzoba lula ukubeka zonke izakhi ezidingekayo.
Ngokuvamile, emadeskini computer amancane, kanye nozakwabo agcwele ungumphumela, wenziwe ngamangqamuzana chipboard noma MDF. imodeli ezingavamile abenziwe ngokhuni noma plastic. Ngaphezu ukusebenza bendabuko, namuhla ungathola ongakhetha ezithakazelisayo kakhulu isitayela hi-tech, okuyinto ezenziwe ngengilazi nensimbi.
Amacebiso awusizo lapho uthenga
Ngokuthenga ithikithi amatafula amancane ikhompyutha, kufanele unake okukhethekile zonke, namajukujuku onke edging, njengoba esitebeleni sisonke ngokukhethekile we ebusweni zokusebenza. Kungcono ukungena onobuhle okunesivivinyo edging ezimise T-- it is ngokuqinile usufakwa inkatho futhi akusho fly, ngisho nangemva ukusetshenziswa isikhathi eside. U emise edging, kanti lokhu kuhambisana phezu usule ngokwayo, has a usebe ophumile, yingakho lolu hlobo ngombala kalula iza off.
Small ikhompyutha emadeskini kokuba luhlaka metal, avame eyenziwe aluminium noma insimbi engagqwali. Amatafula ngabo zenziwa ngengilazi. Lapho uthenga itafula onjalo liyadingeka ukukala ukushuba we usule - ke kufanele okungenani 10 mm. Lapho ekhetha ifenisha lokhuni inothi phezulu yokuthi imininingwane enjalo kufanele embozwe ukuvenisha.
Banquettes ngebhokisi yokugcina ephasishi
Elihlangana viscous: okungukuthi, isimiso wokusebenza, aphoyintimenti